ရန်ကုန်တိုင်း စံပြငါးစျေးမှာဝမ်းစာအတွက် မကြောက်မရွံ့ ၂၄နာရီရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ လူသားများ ( ဗီဒီယိုဖိုင် ) - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
ရန်ကုန်တိုင်း စံပြငါးစျေးမှာဝမ်းစာအတွက် မကြောက်မရွံ့ ၂၄နာရီရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ လူသားများ ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
ရန်ကုန်တိုင်း စံပြငါးဈေးမှာဝမ်းစာအတွက် မကြောက်မရွံ့ ၂၄နာရီရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ လူသားများ ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
ရန်ကုန်တိုင်း စံပြငါးစျေးရဲ့ 15.4,2020 ရက်နေ့ရဲ့မြင်ကွင်းတစ်ချို့ပါ တာဝန်ရှိသူများ စည်းစနစ်ကျစွာနဲ့အထူး ကြပ်မတ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်
public နေရာတွေကို အထူးဂရုစိူက်ကြပါ
ဒီလူအုပ်ထဲမှာ ကူးစက်သူတစ်ယောက်လောက်ပါရင် သွားပြီ ဒီလူတွေအားလုံး ဘယ်လိုက်လို့ ဘယ်ရှာရမှန်းသိပါမလားဗဟိုစံပြငါးစျေးနဲ့ကမ်းနားစျေးဟူ၍စျေးနှစ်စျေးကကပလျှက်တည်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကမ်းနားစျေးကပိတ်ပြီးငါးစျေးကမပိတ်ပါဘူး ၂၄ နာရီရောင်းတုန်းပါ
စျေးစဖွင့်တဲ့ခုနှစ်က ၁၉၉၈ လောက်ကဖွင့်တာပါစဖွင့်တုန်းကမနက် ၂ နာရီတချိန်စျေးရောင်းတယ်နေ့လယ် ၁၂ နာရီတချိန်စျေးရောင်းတယ်ညနေ ၄ နာရီဆိုရင်စျေးတခါးများပိတ်ပါတယ်
အခုနောက်ပိုင်း တော့၂၄ ဖွင့်ကြောင်းတွေပါပြောပါတယ်ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက် ၂၄ နာရီဖွင့်ခွင့်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်🇲🇲အမှန်တရားဘက်တော်သားများအုပ်စုကြောက်ကြပါပညာရှင်တွေကတော့ Herd immunity ကို ခန့်မှန်းနေကြပါပြီ …
သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေရဲ့ တစ်ဝက် 50% အထိကို မှန်းထားကြပါတယ် …စာရွက်ပေါ်ကိုတော့ 30% လောက်တက်လာမယ် ခန့်မှန်းကြပါတယ် …52 သန်းရဲ့ 50 % က 26 သန်း ဖြစ်ပြီး 30% ဟာ 15.6 သန်း ဖြစ်ပါတယ် …
Death rate ratio ကို အနည်းဆုံး 3% နဲ့ပဲ ထားပြီး စာရွက်ပေါ်တက်လာသလောက်ကိုပဲ တွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင် 468,000 ဆိုတဲ့ ကြောက်စရာ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကို ခင်များတို့ မြင်ရပါလိမ့်မယ် …အဲ့ဒီလို အခြေအနေရောက်ခဲ့ရင် infrastructure တွေ ၊ အထောက်အကူပစ္စည်းတွေ ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေ ရဲ့ အရေအတွက်ဟာ ရောဂါတိုးနှုန်းနဲ့ ပြောင်းပြန်အချိုးကျကာ လိုက်နိမ့်ဆင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ကျနော်တော့ အဲ့လို အဖြစ်အပျက်မျိုးကို လုံးဝ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး ၊ ရှောင်လွှဲစရာကလည်း တစ်နည်းပဲ ရှိပါတယ် ..
သည်းခံပါခင်မျာ …ခပ်ရိုင်းရိုင်း ပြောရရင် လူနည်းနည်း ရက်အနည်းငယ် ငတ်တာ ပြဿနာ တက်တာ ခံ မလားလူတွေ အများကြီး အသက်ရှူမဝပဲ သေကုန်တာ ထိုင်ကြည့်မလားဆိုတဲ့ နည်းလမ်း ၂ ခုမှာ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ ဘယ်တစ်ခုကိုမှ သဘောမကျလောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ မဖြစ်မနေ တစ်ခု ရွေးကို ရွေးချယ်ရတော့မယ့် decision time ဟာ ရက်အနည်းငယ်သာ ကျန်ရှိပါတော့တယ် ….
Sorry ! ကျနော် ရေးတာ နည်းနည်းလောသွားပါတယ် ၊ ပထမ တစ်ခုကိုသာ ကျနော်တို့ ရွေးချယ် လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ် …ဒုတိယ တစ်ခုက အချိန်လွန်သွားခဲ့ရင် ရွေးချယ်စရာမလိုဘဲ အလိုလို ဖြစ်လာမယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် ..မြန်မာနိုင်ငံကြီး ကပ်ရောဂါကို အမြန်ဆုံး ၊ အသက်သာဆုံး နည်းလမ်းဖြင့် ကျော်လွှားနိုင်ကြပါစေ။
ကိုဗစ်အတည်ပြု လူနာအများအပြားတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ Music Zone ပိုင်ရှင်ကို တရားစွဲမည်